Muuri News Network » Shir la isku Albaab xirtay oo MD Farmaajo & C/wali Gaas ku dhexmaray Madaxtooyada P/land..
Shir la isku Albaab xirtay oo MD Farmaajo & C/wali Gaas ku dhexmaray Madaxtooyada P/land..
Madaxweynaha dawladda Faderaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaxweynaha dawlad gobaleedka Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa si wadajir ah u qabtay shir Jaraa’id oo ku saabsan ujeedada safarka Wafdiga DF Soomaaliya ay ku yimaadeen deegaanada Puntland maanta.
Madaxweynaha Puntland oo ku hormaray hadalka ayaa soo dhaweeyey Madaxweynaha Soomaaliya, wuxuuna sheegay in ay Puntland nabad iyo barwaaqo tahay oo ay ka socdaan horumar baaxad weyn, wuxuuna cadeeyey in ay tanni maanta tahay mid Soomaaliyeed.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in horumar weyn ay gaartay Puntland, taas oo ah natiijo wanaagsan oo ay Soomaalidu gaartay, wuxuuna tilmaamay in talaabadu tahay geedi socodka dalkan uu gaarayo.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi ayay u ahayd markii ugu horeysay ee uu abid yimaado deegaanada Puntland, wuxuuna soo arkay wax badan oo uu maleysan waayay.
Madaxweynaha ayaa barxada weyn ee Garoowe kula hadlay Shacabka oo u sheegay in Soomaaliya ay tahay mid qura oo ay tahay mid meel u wada socota. Ayna xooga saarayaan sidii horumarkaas loo dhaqaajin lahaa.
Madaxweynuhu wuxuu ka mahad celiyey soo dhaweynta loo sameeyey, wuxuu cadeeyey in uu tagi doona dhulka Puntland oo dhan, lana kulmayo Shacabka Soomaaliyeed oo ay ka wada hadli doonaan horumarka iyo waxa socda oo dhan.
Madaxweynaha Jamhuuriyadu wuxuu sheegay in uu la kulmayo cid kasta si loo aruuriyo fikradaha ay qabaan Shacabka, si loo dhiso Soomaaliya oo sannado badan soo martay dhib iyo wax ay maanta ka kabanayso.
Labada Madaxweyne ayaa si rasmi ah u furayo berrito garoonka DIyaaradaha cusub ee Garoowe, taas oo ah talaabadii ugu weyneyd ee la qaaday, waxaana Garoonka cusub uu noqon doona midkii 2aad oo Casri ah oo laga hirgaliyo Soomaaliya gudaheeda 30-kii sanno ee lasoo dhaafay.